I-Suite yoSapho yeLali epholileyo
Eli gumbi li-2 lokulala labucala liphelele kumgangatho wokuqala wale ndlu i-2,300 sq ft. Indlu yahlaziywa ngokupheleleyo ngo-2020. Ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala eline-tv/wifi, igumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu/iyunithi yeshawa kunye namagumbi okulala ayi-2 aneebhedi ezitofotofo zikakumkanikazi. Kukho indawo yokupaka ngaphandle kwe-driveway kunye nakwindawo yokupaka ezitratweni. Indawo yelawn eneseti yepatio kunye negrille yegesi.
Indawo yethu ifanelekile kwiintsapho kunye namaqela amancinci ahlala eWellsville. Indawo ikulungele ukuhlala ixesha elide njengoko ikhitshi lixhotyiswe kakuhle ukulungiselela ukupheka kunye nekofu, amaqanda amatsha kunye ne-snacks esandleni sakho ukuze uyonwabele. Iindwendwe zinokusebenzisa i-grill yegesi yangaphandle ngexesha lokuhlala kwazo. Amagumbi okulala ayi-1 & 2 omabini aneebhedi ezinkulu kwaye ibhedi epheleleyo ibekwe ecaleni kwigumbi lokuhlala kunye nesofa yokuhlalisa iindwendwe ezi-6.
IWellsville yindawo enomtsalane. Likhaya le-Great Wellsville Balloon Rally. Uya kuyithanda indlela ebukekayo ye-WAG ecaleni kweGenesee RIver. Thatha incopho kwindlu ePinki yeMbali. I-Wellsville Brewery yeyona nto intsha kwiSitalato esikhulu. Zininzi ezinye iindawo ezintle zewayini kunye nokutya. Ungalibali iivenkile ezininzi ezinomtsalane zasekhaya ukufumana into eyodwa.